Hery - Tsiky dia ampy | Jiona 2008 |
Fete de l'internet an-tsary
2008-06-29 @ 14:41 in Serasera.org
Tonga dia efa apetrako eto ny sary vitsivitsy nandritra ny fete de l'internet omaly sy androany nandraisan'ny Telomiova / Jojopil / Serasera / Infogasy anjara. (tohiny)
Fitaterana eto Afrika
2008-06-27 @ 05:19 in ItaliAfrika
Efa ela mihitsy aho no te-hizara aminareo ny fitaterana eto ItaliAfrika fa izao vao vitako... sady nisy sary nahafahana nanohana ny fitarainana
Fete de l'Internet: Ho ao ny Telomiova
2008-06-25 @ 13:47 in Vaovao
Dia am-pifaliana no hilazana amintsika sy hanasana antsika rehetra fa handray anjara mavitrika ao amin’ny "Fete de l’Internet" ao amin’ny Hotel Carlton (Hilton teo aloha) ny Telomiova amin’ny 28-29 jiona 2008 izao.
Euro2008: Mody ny Italiana
2008-06-23 @ 07:33 in ItaliAfrika
Eritreritra fohifohy sendra taorian'ny naharesen'i Italia alina.
Azo atao hoe tsy ao intsony ireo mpilalao italiana ireo fa tsy tahaka ny tamin'ny mondialy farany teo. Io no tena hadisoan'ny mpanazatra... satria izy no mpifidy mpilalao. Kanefa iza moa no mpilalao hofidina eo raha tsy misy? (tohiny)
CyberFety Gasy Androany
2008-06-21 @ 05:55 in Vaovao
Androany ny fetin'ny mozika, hetsika maro isankarazany no hita aty Eoropa, ary inoako fa tsy ho latsak'izany koa ny toerana hafa. Fa miara-mitontona amin'izany indrindra ny cyberfety izay andraisan'ny Telomiova.org anjara ihany koa. (tohiny)
Resa-baolina Euro2008 faram-parany
2008-06-16 @ 16:22 in Eritreritra mandalo
Koa satria mety ho raraka ny Italiana dia ity angama no resaka Euro 2008 faram-parany hosoratako. Raha tafakatra tampoka dia mbola hanoratra ihany aho :-)
Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia miandry famindram-po farafahakeliny roa ny Italiana vao tafakatra amin'ny dingana manaraka.
Avy any amin'ny Pays-bas aloha... Naverimberin'ny Italiana matetika mihitsy hoe tokony mba hilalao tsara ry zareo mandritra ny fihaonany amin'i Roumanie rahampitso. Fantatra mantsy fa raha vao resin'i Roumanie fotsiny ry zareo dia miara-mody Italia sy i Frantsa... Manan-jo tsara mihitsy anefa i Hollande mba hampilalao an'ireo mpilalao mpiandry, izany hoe mety tsy dia hahay loatra, satria ny mpilalao tena izy dia tehirizina hiatrehina ny dingan'ny ampahefa-dalana.
Avy amin'i La Frantsa indray... mila mandresy an'i La Frantsa koa i Italia raha te hanana fahafahana be be kokoa ho tafakatra. Ezahina voizina be mihitsy hoe resy ireo tamin'ny Mondial ka tokony ho resy koa amin'ity fihaonana ity.
Fa maniona moa nefa Italia raha tsy tafakatra e? Raha tena nahay dia tsy nila notsotsofina tahaka izao akory... Wait and see
Ny andro androany? :-)
2008-06-13 @ 09:09 in Izaho sy ny ahy
Mahafinaritra ny andro androany ho anay mahery vintana. Teraka tamin'ny vody alakaosy (ie, nojereko tamin'ny alimanaka tamin'izany fotoana izany). Zoma faha 13.
Ny zava-misy androany izany dia:
Vendredi 13: Raha manao lotto aho dia mahazo... fa zah tsy hanao :-) (C'est vraiment amusant de croire d'avoir un certain pouvoir et de ne pas en profiter :-p)
Saint Antoine de Padou: Tsy miasa ny tapakandro hariva... donc mahita baolina indray (yess).
Saint Antoine de Padou mantsy no mpiaro ity toeram-piasana ity. Dia fety izany androany.
Euro2008 Italie - Roumanie: baolina sy politika. Nisy fotoana taloha resy ny Italiana dia be dia be ny Roumains tsy ara-dalàna noroahina. Mety mbola hitranga?
Serveur Vaovao RVG
2008-06-11 @ 10:06 in Serasera.org
Mandeha nanomboka androany maraina ny Serveur iray vaovaon'ny RVG. Avo roa heny mihoatra noho ilay teo aloha ny tanjak'io serveur io. Ny RVG moa dia mipetraka anaty serveurs dédiés roa ka ny iray serveur misy ny encodeurs sy ny fitaovana ho an'ny DJ, ny iray kosa misy ny Base sy ny Stream ary ny Serveur Web.
Amin'izao dia efa voafehy tsara ny fifindrafindrana serveur ary voafehy ho ao anatin'ny 30 segondra ny fahatapahana raha be indrindra. Ny mpihaino aza dia tsy mandre fahatapahana akory satria tonga dia mi-basculer ny IP (mampiasa IP fail-over).
Misy fikasana vitsivitsy tiana hatao mandritra io vakansy io (vakansy sisa no fotoana malalaka). Anisan'izany ny fanatsarana ny momba ny fandaharana hira. Hisy koa angamba ny version light-n'ny RVG... Wait and see.
Resy Italia Faly ny "Italiana"
2008-06-10 @ 10:55 in ItaliAfrika
Resin'i Holandy 3-0 (telo sy donga) i Italia omaly. Tahaka ny lehilahy rehetra dia mba tia mijery baolika kitra koa aho... ary manaraka sy tsy azo tabatabaina mihitsy rehefa fifanitsanana lehibe toy ny CAN, Euro, Mondial. Omaly ary dia ny ekipa Holandezy sy ny Italiana no nihaona. Fidirana voalohan'ny Italiana tamin'ity Euro 2008 ity. Fantatsika ny vokatra, resy 3-0 i Italia.
Fa ny tena nahagaga ahy, isaky ny misy baolina miditra dia misy mihoraka be foana. Kanefa tsisy Holandé mipetraka akory eny aminay eny. Dia rehefa nalefa ny eritreritra dia hoe misy tsy maka Italiana maro ny mpjery eny amin'ny manodidina anay eny... ary tsy matahotra atao hoe tsy maka ekipa Italiana. Toerana be vahiny mantsy eny, ka amin'izao mampafanafana ny resaka vahiny eto Italia izao dia atao daholo koa izay fomba rehetra hampisehoana ny fankahalàna ny governemanta. Dia afangarondry zalahy indray izany ny resaka politika sy ny resaka sport. Halako bika tsy tiako tarehy fotsiny izao.
Tsy afa-mamaly ny taratasy (2)
2008-06-06 @ 08:55 in Izaho sy ny ahy
Milona be ny internet ato am-piasana. Misy tsivalahara mi-telecharger mitroka ny bande rehetra. Vokany mahakamo na dia ny manokatra mailaka aza. Izay tena important ihany sisa no voavaky... ny sisa miandry any an-trano. Rehefa any antrano anefa, maika hatory (yes... zava-baovao vao hita tato ho ato hoe hay mamy ilay matory aloha lol). Dia mba mifoha maraina fa variana amin'ny zavatra hafa indray. Milamina kokoa ilay mifoha amin'ny 4 na amin'ny 5 dia mahavita zavatra be dia be dia tsy voavaky indray ilay mailaka.
Ah! fa ny chat misokatra. Indrindra ny ao amin'ny karajia.org rehefa mampiasa Pidgin. Ny hafa mitsilopilopy eo.
Angamba mila sekretera partout-coller, sy parti-couleur... avis aux âmes-à-terre.
Sao dia ato ny hafatrao? :-)